Rafa Benitez Oo Sharraxay Sida Liverpool Ay Ku Garaaci Karayso Real Madrid Lugta Labaad Ee Champions League Ee Arbacada - Laacib
HomeWararka Champions LeagueRafa Benitez Oo Sharraxay Sida Liverpool Ay Ku Garaaci Karayso Real Madrid Lugta Labaad Ee Champions League Ee Arbacada
Rafa Benitez Oo Sharraxay Sida Liverpool Ay Ku Garaaci Karayso Real Madrid Lugta Labaad Ee Champions League Ee Arbacada
April 11, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababarihii hore ee kooxaha Liverpool iyo Real Madrid ee Rafa Benitez ayaa sharraxaad ka bixiyey sida ay labada kooxood u kala adkaan karaan lugta labaad ee wareegga siddeedda Champions League.
Benitez ayaa sheegay in aanay jirin sabab kooxda tababare Jurgen Klopp aanay usoo laabanin marka ay Real Madrid ku qaabbisho Anfield, waxaanu hoosta ka xariiqay in Reds ay awood u leedahay in Real Madrid ay kaga badiso labada gool ee looga baahan yahay iyo ka badan.
Tababaraha reer Spain ayaa rumaysan in Liverpool ay ku qanacsan tahay, in ay samayn karto guul soo laabasho ah oo ay kaga takhalusi karto Real Madrid, laakiin waxa uu haddana tilmaamay in kooxda martida ah ay iyaduna maskax ahaan deggan tahay.
Rafa Benitez oo sharraxaya sida Liverpool ku garaaci karayso Real Madrid ayaa yidhi: “Sida uu kulanku yahay, haddii aad dhaliso gool, waad soo laabatay. Xataa haddii uu goolkaasi qaato saacad. Waxay ila tahay, in furaha guushu aanu ahayn inaad aad u walaacdo, Liverpool waa inay xakamayso walaaceeda, waana in aanay degdegin. Waa in ay sii wadaan heerka yoolkooda iyo in ay ciyaarta diiradda saaraan.
“Marka la eego tayada ciyaartoydooda, goolku wuu iman doonaa. Laakiin Liverpool waa in ay joogto meel ay shabaqeeda ka ilaashan karto, weerar ahaanna ay aad ugu sarreeyaan iyagoo 90ka daqiiqadoodba samaynaya cadaadis ka badan intii Madrid.
“Arrinta murugada leh waa in aanay haysanin taageereyaashii ay isku hallayn jireen ee garoonka.”
Rafa Benitez waxa kale oo uu sheegay meelaha ay ka liidato Real Madrid, waxaanu yidhi: “Real Madrid waa koox dheelitiran. Casemiro ayaana shaqadaas si fiican ugu qabta. Wuxuu u ogolaadaa Toni Kroos iyo Luka Modric in ay hore u socdaan. Si aad ugu guuleysato kulamadana, waxaad u baahan tahay dheellitirnaan.
“Waxa kale oo uu Casemiro u ogolaadaa difaacyada in ay hore u socdaan. Laakiin xaqiiqada ayaa waxay tahay, in aanay cadaadis badan keenin.
“Nacho waa ciyaartoy fiican, shakina igagama jiro tayadiisa iyadoo ay maqan yihiin Sergio Ramos iyo Raphael Varane, laakiin Liverpool wax cadaadis badan ah may saarin. Waxa kale oo aan ku darayaa difaacda iyo Mohamed Salah iyo Sadio Mane in ay abuurayaan dhibaato lugta labaad haddii ay cadaadis badan la yimaaddaan.”